US Travel dia te-hitsangatsangana tsy ho ela ianao? Marina ve? | Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Travel Associations News • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
US Travel dia te-hitsangatsangana tsy ho ela ianao? Marina ve?
Home » Lahatsoratra » Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa » US Travel dia te-hitsangatsangana tsy ho ela ianao? Marina ve?
“Andao ho any”, hoy ny fanambarana iray izay manao hoe “Rehefa tonga ny fotoana”, dia ny fizahan-tany any Etazonia no tiana holazaina
Ny US Travel androany dia nanolotra ny hetsika vaovao miaraka amin'ireo mpitarika indostrialy manerana an'i Etazonia hanampy ny Amerikanina hientanentana amin'ny dia indray. Ny fitsangatsanganana dia mitovy amin'ny fahasambarana araky ny fandaminana
Ny fieritreretana ny dia ho avy dia miteraka fahasambaran'ny olona iray araka ny fikarohana nataon'ny US Travel, ary ny "Andao ho any", "Andao ho avy tsy ho ela, ary tsy ho ela" "Andao hihaona eo" natomboka.
Ny fikambanana mpitety faritany lehibe indrindra nanatevin-daharana an'io fanentanana io. Ny fikambanana fitsangatsanganana lehibe indrindra dia miady mba hahatafavoaka velona ary ny lalàna momba ny quarantine dia tsy ny hafatra tsara indrindra hivoahana amin'ny faneriterena sy ny filan'ny orinasa.
Ny mpitondra tenin'i Marriott dia nanatevin-daharana ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety US Travel androany avy amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny izay nanondro fa faly ireo mpitsidika.
Nilaza ny Travel US fa tsy hanohana ny fanjakana hametraka lalànan'ny quarantine izy ireo, fa tsy nety naka fanontaniana eTurboNews hamaly ny antony miakatra ny isa COVID-19 raha esorina ny quarantine. Ohatra amin'izany i Espana sy i Hawaii ihany koa rehefa navelan'ny fanjakana hiditra tsy misy kararantina ny miaramila amerikana amerikana sy ny havany ary ny namany.
Ny olon-drehetra dia afaka miombon-kevitra amin'ny fiverenana amin'ny ara-dalàna dia tsara, saingy mety ho zava-misy ve izany? Rahoviana izy io no mety ho zava-misy, ary amin'ny fomba ahoana? Angamba mianatra avy any Hawaii. Napetraka ny fanidiana hidin-trano mihoatra ny herinandro lasa izay ary mararin'ny aretina marobe no midina indray - tena lehibe. Mandritra izany fotoana izany, potika ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany tena ilaina. Ho rava lavitra kokoa ve ny indostria raha tsy apetraka ny lalàna henjana toy izany? Io no fanontaniana tsy azon'ny fitsangantsanganana amerikana valiana marina.
Henoy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety sy ny antsipiriany rehetra momba LiveStream Podcast: